Maraykanka oo ka fiirsanaya xariirka kala dhaxeeya Dowladda Soomaaliya – Xogmaal.com
Maraykanka oo ka fiirsanaya xariirka kala dhaxeeya Dowladda Soomaaliya
Dhinaca kale, wakiilka sare ee Midowga Yurub Josep Borrell ayaa sheegay in ficilka baarlamanka uu waxyeeleynayo dadaalka muddada fog socda, ee ay taageeraan Midowga Yurub iyo beesha caalamka, ee Soomaaliya dib loogu dhisayo ayada oo loo marayo ifaham.
“Midowga Yurub waxa uu rumeysan yahay in ansixinta iyo saxiixa qaraarkan ay kala qeybin doonaan Soomaaliya, keeni doonaan dib u dhacyo dheeri ah ayna khatar weyn ku tahay nabadda iyo xasil’oonida Soomaaliya iyo deriskeeda. Xaqiiqdii uma adeegayso danaha shacabka Soomaaliyeed,” ayuu yiri Borrell.
“Waxaan ku baaqeynaa in si deg deg ah loogu laabto wada-hadallada ku saabsan qabsoomida doorashooyinka, iyadoo aan la dib dhigin, kuna saleysan heshiiskii 17-ka September. Haddii tan lagu guul-darreysto, Midowga Yurub waxa uu ka fakari doonaan tallaabooyin adag.”
Cumar Filish oo iskugu yeeray dhamaan Gudoomiyaasha Degmooyinka
Kahor Safarkii labada Madaxweyne ee Jubaland iyo Puntland …